भतिजकी हिरोइनसँग आकाशको रोमान्स ! « Ramailo छ
भतिजकी हिरोइनसँग आकाशको रोमान्स !
प्रकाशित मिति : Feb 7, 2018
भनिन्छ नि मानिसको उमेर जति बढेपनि मानिसको मन चाहि जवान नै हुन्छ । चालिस कटेका निर्देशक तथा अभिनेता आकाश अधिकारीको मन पनि जवान नै रहेछ । यदि अधिकारी बुढो हुन्थे भने सायद झण्डै छोरीको उमेरकी हिराइनसँग ठुम्का लगाउँने थिएनन् ।
आकाशकै निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘के म तिम्रो होइन र’ बाट नायिका मरिस्का मेरी पोखरेलले डेव्यु गरेकी थिइन् । उनको अपोजिटमा उनकै भतिज आर्यन अधिकारी प्रस्तुत भएका थिए । तर, पछिल्ला केही कार्यक्रमहरुमा भने निर्देशक अधिकारी भतिजकी हिरोइन पोखरेलसँग ठुम्का लगाइरहेका छन् । हेटौंडामा सम्पन्न उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रमपछि अधिकारीले मरिस्कासँग कान्छी म्युजिकल नाइटमा ठुम्का लगाए ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष समेत रहेका आकाश अधिकारी एक समयका नायक हुन् । करिश्मा मानन्धरदेखि रेखा थापासम्म स्क्रिन सेयर गरेका आकाशको पछिल्ला गतिविधले भने उनका नायकिपन ताजै रहेको प्रष्टै हुन्छ । भन्नेहरुले भने आकाशको यो नायकीपनलाई ‘चालिस कटेसी रमाउने बानी’ बसेको भन्न भ्याए ।